Andro iraisam-pirenena ho an’ny ala honko: miantoka ny toekarena sy ny tombontsoan’ny mponina | NewsMada
Andro iraisam-pirenena ho an’ny ala honko: miantoka ny toekarena sy ny tombontsoan’ny mponina
Nankalazaina omaly 26 jolay ny Andro iraisam-pirenena ho an’ny ala honko. Na eo aza ny krizy isan-karazany ateraky ny valanaretina, nankalazaina izany fotoana izany hanomezana hery sy hanomezan-danja ho fiarovana ny ala honko eto Madagasikara.
Ankehitriny, 236 000 ha sisa ny ala honko manamorona ny morontsiraka andrefana eto amin’ny Nosy, 2 % amin’ny ala honko rehetra maneran-tany. Antapitrisany hekitara maro ny efa potika nefa mitahiry zavaboary sy harena maro isan-karazany io ala io, tsy hita ny ankamaroany afa-tsy eto Madagasikara. 2,5 t hatramin’ny 3,9 t isaky ny km2, isan-taona ny drakaka avy ao ami­ny, antom-piveloman’ny olona maro any amin’ireny faritra ireny.
«Fototry ny famokarana maro ny fisian’ny ala honko any amin’ny morontsiraka andrefana, koa tombontsoa ho an’ny toekarena sy ny mponina ny fiarovana azy», hoy Randriamanantena Dannick, avy ao amin’ny WWF. Hatra­min’ny 2007, miara-miasa amin’ny vondron’olona ifotony, ny fikambanana samihafa sy ny firaisamonim-pirenena ny WWF ho fiarovana ny
50 000 ha ny ala honko any Menabe, Melaky, sy Diana. Fiaraha-miasan’izy ireo, nahavitana namboly honko 19 tapitrisa fototra, ny 2009 hatramin’izao 2020 izao. Ankoatra ny fanaraha-maso, nomena an­draikitra amin’ny fitantanana sy ny fiarovana izany ala izany ny mponina any ifotony.
Miaro amin’ny rivo-doza
Hiantohan’ireo mponina ireo avy amin’ny fitantanany ny manamarina fa manan-danja lehibe ny harena rehetra vokatra miankina amin’ny fisian’io ala io. Vahaolona natoraly miady amin’ny fiovan’ny toetr’andro sy ny voka-dratsiny ny honko. Ohatra, mitroka rivotra maloto (CO2) bebe kokoa no ho ny ala ambonin’ny tany, miaro ny morontsiraka amin’ny rivo-doza izy. «Fotoana izao hiarovana ny ala honko», fanadihadiana natao amina firenena fito, anisan’izany i Madagasikara, iarahan’ny BMZ (1), ny UICN (2) sy ny WWF. Atao izany ho fanamafisana ny fitantanana, ny fiarovana ary ny fampitsaharana ny fanapotehana io karazan-kazo io.
Nampandraisana anjara amin’izany Andro iraisam-pirenena izany ny radio sy ny tambajotran- tserasera rehetra eto Madagasikara. Hetsika noraisin’ireo fikambanana any ifotony, isam-paritra miaraka amin’ny minisitera roa : Ton­tolo iainana sy fampandrosoana maharitra ; Fambolena, fiompiana sy jono. Marihina fa sarotra ny fanatanterahana ny fiarovana ny tontolo iainana amin’ny ankapobeny raha mbola mahazo vahana ny fahantrana.
BMZ (1) : Coopération économique et du développement
UICN (2) : Union internationale pour la conservation de la nature